Spicy mbatatisi ine chorizo ​​| Kicheni Mapepa
Zvinonhuwira Chorizo ​​Potato
Maria vazquez | 06/06/2021 10:00 | Stews uye Soups Mapoka
Ndichitora mukana wekuti mazuva ekupedzisira kwanaya uye kwatonhorera kuchamhembe, ini ndinopa zano rakareruka kwazvo iro isu tinowanzo shandisa mukati memwedzi inotonhora yegore: zvinonhuwira mbatatisi ine chorizo. Sevadi vezvirugu, ini handikwanise kurega kutaura izvi, imwe yeakareruka atinogadzirira kumba.
Mbatatisi, chorizo ​​uye zvimwe zvishoma zvinhu mune ichi chikafu. Izvo hazvireve kuti iwe haugone kuisa zvimwe zvinongedzo kwazviri kuti zviite zvizere. Vamwe diced huku, tofu, kana tempeh Inokwana zvakakwana muchiyero. Uye sekuperekedza, hapana chakaita se green saladi.
Maminitsi makumi mana, iwe hauchazoda zvimwe kuti uve nechikafu ichi chagadzirira. Zano rangu nderekuti kana iwe uchinge wasvika pazviri, gadzira zvakakwana kugadzirisa chikafu pane mamwe mazuva maviri. Chausingazokwanise kuita nechikafu ichi kuimisa nechando uye kuti sekutaura kwatamboita dzimwe nguva mbatatisi haina kupindura mushe nenzira iyi.
2-4 mashupuni emafuta emuorivhi asina kuwanikwa
1 hombe chena hanyanisi
Pepper mhiripiri tsvuku
Zvimedu zvitatu zvezvinonhuwira chorizo
½ teaspoon inopisa (kana inotapira) paprika
1 teaspoon yenyama yechorizo ​​mhiripiri
Chekerera hanyanisi uye mhiripiri uye fry ivo mupani uye mashoma mashupuni emafuta kwemaminitsi gumi.
Pashure Wedzera chorizo, mbatatisi yakasvuurwa uye yakadzvanywa nemwaka. Saute kwemaminetsi akati wandei usina kumira uchikurudzira kusvikira chorizo ​​yaburitsa chikamu chemafuta ayo.
Tevere, tinowedzera iyo paprika, iyo chorizo ​​mhiripiri nyama uye tinovhara nemuriwo muto.
Isu tinofukidza iyo casserole uye Pheka iyo yose kwemaminetsi gumi nemashanu kana kusvikira mbatatisi zvanyorova.
Takanakidzwa nezvinonhuwira, zvinopisa mbatatisi ine chorizo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Stews uye Soups Mapoka » Zvinonhuwira Chorizo ​​Potato
Mapeya ane mbatatisi yakakangwa uye bhekoni